လူထု မောင်ကာဠု: လိင်ဇာတ်လမ်းတွေ လတ်တလောရိုက်ကူးရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းသမီးဆိုး(Thet Koko) ငြင်းဆို
ယခုတစ်လော လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် လူအများစိတ်ဝင်စားနေကြသည့် သမီးဆိုး(Thet Koko)၏ လိင်အသားပေး ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမည့်သတင်းသည် မဟုတ်မှန်ကြောင်း Eleven Media Group ၏မေးမြန်း မှု ကို သမီးဆိုး(Thet Koko) ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
“မဟုတ်ပါဘူး။ သမီးဆိုး(Thet Koko)က ဒီလို ရိုက်ကူးမှု ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၊ သမီးဆိုးက လိင်ဇာတ် လမ်းတွေ ကိုတော့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်လည် ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ် အခု ဓာတ်ပုံမှာတွေ့ရတဲ့
သမီးဆိုးနဲ့ တွဲးကြတဲ့သူတွေဆိုတာကလည် Living togetherသဘောပါပဲ”
“ဒီလိုဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးဖို့ဆိုတာ ကျွန်မအနေနဲ့ အခုလောလောဆယ် အစီစဉ်တော့မရှိပါဘူး. .နောက် တချိန်တော့ မပြောတက်ဘူးပေါ့လေး ”
အဆိုပါ လိင်မှုဇာတ်ကား ရိုက်ကူးကြမည်ဆိုသည့် အကြောင်းအရာများကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ များ နှင့် လူငယ်တချို့၏ ပြောစကားများတွင် ရေပန်းစားပြောဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သမီးဆိုး(Thet Koko)က ယခုတလောတွင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်၌ လိင်အသားပေး ဓာတ်ပုံများဖြင့် လူအများ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အဖော်အချွတ် ဓာတ်ပုံများကို တင်လာခြင်းကြောင့် ယခု လို စိတ်ဝင် စားခြင်းခံရသူများ ဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းလာသည့် ဒီမိုကရေစီခေတ် တွင်လူငယ် အများအပြား သည် နည်းလမ်းလွဲမှားစွာ အသုံးပြုလာကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အွန်လိုင်းအသုံးပြုကြ သည့် ခေတ်မီလူကြီး များကသုံးသပ် ပြောကြားကြသည်။
Credit To: Eleven Media Group
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 00:53
[ စွတ် ဖဲ့ ]5April 2014 at 01:28
ကပ္ပလီ ဖြတ်ဖောက်ချုပ် ပုံစံကြီးက
တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်မဲ့ မင်းသား
မိန်းမအစစ်လား ဂန်ဒူးလား မသိရတဲ့ဒီဟာကြီးကို
[ စွတ် ဖဲ့ ]5April 2014 at 01:35
ကိုထွားကြီး5April 2014 at 01:39
ကိုထွားကြီး5April 2014 at 01:42
ပက်ပက်စက်စက်ခံထားတာဆိုတော့ . .
Anonymous5April 2014 at 01:46
စွတ်ဖဲ့ ပြောတာ ဒီတခါတော့ ထောက်ခံတယ်ဟေ့
Anonymous5April 2014 at 02:29
Anonymous5April 2014 at 02:42
Anonymous5April 2014 at 02:44
Myo Han Htun @ Ko Toe5April 2014 at 03:31
မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ဒီလောက်ထိ ပစ်ပစ်ခါခါပြောဖို့မသင့်ဘူး ထင်တယ်
တကယ်တော့ သမီးဆိုး ဆိုတာ အရမ်းသဘောကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ
ဘယ်လောက်ထိ သဘောကောင်းသလဲဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပဲ ကောင်းကောင်းလိုးလို့ ရတဲ့မိန်းကလေး ပါ
ဘန်ကောက်ကိုအလည်လာတိုင်း ကျနော့်ဆီမှာ ဝင်ပြီး ခရီးသွားဟန်လွှဲ အလိုးခံနေကျ မိန်းကလေးပါ
hotel ခ ကုန်ကျစရိတ်တွေ သူကစိုက်တဲ့အပြင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါသေးတယ်
အလိုးခံတဲ့နေရာမှာလဲ ပါရမီကောင်းတဲ့အပြင် လီးစုပ်ပေးခြင်းဖင်လျက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါတယ်
အခုတော့ကျနော်နဲ့ ဇာတ်လမ်းပြတ်သွားလို့ တခြားဘဲတပွေ နဲ့ လိုးနေပါတယ်
HIV ရနေပြီလို့လဲ ကြားပါတယ်
Anonymous5April 2014 at 04:57
Myo Han Htun @ Ko Toe မိတ်ဆွေလဲHIV ရနေပြီ်လာ်း
Myo Han Htun @ Ko Toe5April 2014 at 06:24
ကျနော်နဲ့လိုးခဲ့စဉ်က သူ့မှာ HIV မရှိသေးဘူးခင်ဗျ .
နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ကရာလူတွေနဲ့ ပက်ပက်စက်စက်ခံလို့ HIV ကူးစက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
နီကရိုးလီး ကုလားလီး အဖြူကောင်လီး လီးပေါင်းစုံကို စွဲမက်နှစ်သက်သူလေးပါ
သူမရဲ့ အမည်ရင်းက စင်သီယာကိုကို ပါ .
သောက်ဖုတ်မှာ မှဲ့ပါ ပါတယ် .
တခါတရံ ပုလွေမှုတ်တာများ တနာရီကျော်လောက် ကြာအောင် မှုတ်ပေးပါတယ် .
သူမကို လိုးဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာ စစ်ဗိုလ်လဲ ပါတယ်
Anonymous5April 2014 at 21:29
ဟိုတယ်တခုမှာ သူမနဲ့အမှတ်တရတခု။ ရှက်တယ်ဟိုဖက်လှဲ့ပေးပါတဲ့ သူမပြန်လှဲ့ဆိုမလှဲ့တဲ့။ ကကျွန်တော်လှဲ့ပေးမိတယ်။ သူမကပုဆိုးကိုချွတ်ချတယ်။ဘာလုပ်မလို့လဲဆိုတော့ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ ခုသိရမှာပါတဲ့။ အောက်ခံဘောင်းဘီမပါတော့ ဘာလုပ်မလို့ပါလဲပေါ့။ ကျွန်တော့နောက်မှာဒူးထောက်ပြီး ကျွန်တော့ဖင်ဝက်ုလျာနဲ့အားရပါးရယပ်ပေးတဲ့သူမကိုအံ့သြရတယ်။ လီးကိုလဲနောက်ကနေဂွင်းကိုင်ပေးတော့ လရေတွေအများကြီးသူမအာခေါင်ထဲပန်းထဲ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့ကိုပထမဆုံးချီးပြောင်အောင်ဖင်ယပ်ပေးခဲ့တဲ့သူမကိုကျေးဇူး။
Myo Han Htun @ Ko Toe6April 2014 at 03:32
စင်သီယာကိုကို ခေါ် သမီးဆိုး ဟာ လီးစုပ်ဖင်လျက် ရတာကို အလွန်နှစ်ခြိုက်စွဲလမ်း တဲ့ မိန်းက လေးပါ
ကျနော်နဲ့ လိုးပြီးတိုင်း သူ့အာခေါင်ကို ဖြဲပြီး သုက်ရည် အပြည့် ပန်းပေးနေကျပါ
အခု မိတ်ဆွေ နဲ့ ကျနော် ပြောနေတဲ့ comment တွေကို ဖတ်မိရင် ကျနော်တို့ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သူမ သိမှာ သေချာပါတယ်
Myo Han Htun @ Ko Toe6April 2014 at 03:36
သူမဟာ လိုးလေ လိုးလေ ငတ်မပြေ ဆိုတဲ့ ကာမဘီလူးမလေး ပီပီ4.5 ချီ လိုးပြီးရင်တောင် ထပ်လိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုရင် အငမ်းမရ လီးငုံပေးတတ်သူပါ
တခါတရံ အချီပေါင်းများစွာ လိုးပြီးလို့ ညှိုးသွားတဲ့ ကျနော့် ရဲ့ လိင်တံကို ငုံပေးရင် အိပ်ပျော်သွားတတ်သူလေးပါ
အော် . .HIV သမီးဆေိုး လေးရေ .
ဒီစာကို မင်းဖတ်မိရင် ကိုယ့်ကို သတိရမှာပါ
ဖတ်နေမယ် ဆိုတာလဲ သီပြီးသားပါ . .
Anonymous5April 2014 at 05:41
အဲ့ ဖာသည်မကို အလကာပေးလိုးတောင် စဉ်စာမယ်...
Anonymous5April 2014 at 08:47
သမီးဆိုးမျက်နှာ စောင်နဲ့အုပ် လိုးမယ်ကွာ